अनलाइनबाटै श्रम स्वीकृति दिने व्यवस्थाले श्रमिकले कार्यालय धाउन पर्ने बाध्यताको अन्त्य गरेको छ | Ujyaalo Online:: Nepal News, Nepali Samachaar
अनलाइनबाटै श्रम स्वीकृति दिने व्यवस्थाले श्रमिकले कार्यालय धाउन पर्ने बाध्यताको अन्त्य गरेको छ
जेठ ६, २०७९ शुक्रबार १६:१२:३५ | रमेश अर्याल
आज अर्थात् जेठ ६ गतेदेखि सबै खाले श्रम स्वीकृति पूर्ण रूपमा अनलाइन प्रदान गर्न थालिएको छ । यसअघि गएको माघदेखि पुनः श्रम स्वीकृति र वैशाखदेखि संस्थागत श्रम स्वीकृति पनि अनलाइनबाटै प्रदान गर्न थालिसकिएको छ ।
आधुनिक प्रविधिको प्रयोग गरी हामीले जुन कार्यालयमा धाउन पर्ने, लाइन बस्न पर्ने बाध्यताको अन्त्य गरेका हौँ । अबदेखि व्यक्तिले आफू रहेकै ठाउँबाट श्रम स्वीकृति लिन सक्नुहुन्छ ।
यसरी अनलाइनबाटै सेवा प्रभाव गर्दा कार्यसम्पादन पनि छिटो र सरल रूपमा भएको हामीले अनुभव गरेका छौँ ।
माघभन्दा अघिसम्म बिहान ७ बजेदेखि सेवाग्राहीहरू कार्यालयमा आएर लाइन लाग्नुहुन्थ्यो । त्यो लाइन बेलुका ६/७ बजेसम्म पनि रहिरहन्थ्यो । भिड व्यवस्थापन र लाइन मिलाउनकै लागि ६/७ जना प्रहरी खटिनु पर्ने अवस्था थियो । यस्तो हुँदा कार्यालयको बारेमा पनि विभिन्न किसिमका गुनासाहरू आइरहन्थे ।
यता कर्मचारीलाई पनि तनाव हुन्थ्यो । काम गरौँ सेवाग्राहीलाई बेवास्ता गरेको जस्तो अनि सेवाग्राहीको कुरा सुनौँ काम नहुने समस्या थियो । तर माघ पछाडि जब पुनः श्रम स्वीकृति पूर्ण रूपमा अनलाइनबाट मात्र गर्न थालियो त्यसले पनि केही भिड व्यवस्थापन गर्‍याे ।
त्यसपछि गएको वैशाखदेखि संस्थागत श्रम स्वीकृति पूर्णरूपमा अनलाइनबाट गरियो । र अहिले नयाँ व्यक्तिगत श्रम स्वीकृति पनि पूर्ण रूपमा अनलाइनबाट नै भएपछि अब कोही पनि व्यक्तिले श्रम स्वीकृतिको कामका लागि कार्यालयमा धाउनु पर्ने, लाइन लाग्नु पर्ने अवस्था छैन । कार्यालयमा कर्मचारीहरूले पनि शान्त वातावरणमा काम गरिरहनुभएको छ ।
हाम्रो भनाइ चाहिँ तपाईँहरू नठगिनुहोस् भन्ने नै हो । कागजात पुर्‍याएर आवेदन दिनुहोस् । श्रम स्वीकृति लिएपछि मात्र विदेश जाने जहाजको टिकट काट्नुहोस् ।
सेवाग्राही पनि श्रम स्वीकृतिकै लागि भने ताप्लेजुङबाट बस चढेर काठमाण्डौ आउने, होटलमा बस्नु पर्ने, एक दुई दिनमा काम नभए उहाँहरूको खर्च झन् लम्बिने अवस्था थियो ।
तर अहिले बस चढेर काठमाण्डौ आउनुको साटो आफ्नै घरबाट, आफ्नै मोबाइलबाट पनि आवेदन दिन मिल्ने भएको छ । यदि जान्नुभएन भने नजिकको साइबरमा गएर २ ४ सय दिएर काम लगाउँदा उहाँहरूको खर्च र समय दुवैको बचत हुन्छ ।
तर पनि सेवाग्राही अलिकति चनाखो चाहिँ हुनु पर्ने छ । बिमा गर्दा कति रकम लाग्छ, कल्याणकारी कोषमा कति बुझाउन पर्ने हो भन्ने कुरामा चाहिँ जानकार हुन पर्छ नत्र फेरि पनि ठगीमा पर्ने सम्भावना हुन्छ । सहयोगमा नाममा कसैले ठगी गर्न सक्छ भन्ने कुरामा चनाखो हुन आवश्यक छ ।
हाम्रो उद्देश्य भनेको छिटो, छरितो र गुनासोरहित सेवा प्रदान गरौँ भन्ने हो । हामीले कार्यालयबाट अझै सुधार गर्नु पर्ने कुराहरू केही छन् भने सुझाव दिँदा पनि हुन्छ । हाम्रो भनाइ चाहिँ तपाईँहरू नठगिनुहोस् भन्ने नै हो । कागजात पुर्‍याएर आवेदन दिनुहोस् । श्रम स्वीकृति लिएपछि मात्र विदेश जाने जहाजको टिकट काट्नुहोस् ।
अनलाइनमार्फत श्रम स्वीकृति लिनका लागि सबैभन्दा पहिला त वैदेशिक रोजगार सूचना व्यवस्थापन प्रणालीमा जानुपर्छ । त्यहीबाट नै सम्पूर्ण प्रक्रिया अघि बढाउने हो । विभिन्न जानकारी, विवरण र कागजातहरू त्यहाँ अपलोड गर्न पर्छ ।
जसमा अति आवश्यक भनेको राहदानी, भिसा, करार सम्झौता, स्वास्थ्य परीक्षणको प्रमाण, अभिमुखीकरण तालिम लिएको हुनुपर्ने लगायत रहेका छन् । बिमा र कल्याणकारी कोषको रकम जम्मा गरेको हुनुपर्छ । यस्तो रकम पनि अनलाइनबाटै जम्मा गर्न सकिन्छ ।
अब नयाँ व्यक्तिगत श्रम स्वीकृतिकै प्रक्रिया अनुसार श्रम स्वीकृति पाइने भएकाले अबदेखि अभिमुखीकरण तालिम र स्वास्थ्य परीक्षण भने गर्न पर्छ । बाँकी प्रक्रिया नयाँ श्रम स्वीकृति लिँदा जे हुन्छ सबै त्यही नै हुन्छ ।
यसका साथै स्वघोषणा फारम पनि भर्नुपर्छ । म कसैको प्रलोभनमा नपरी, ठगीमा परेको छैन र मैले यहाँ पेस गरेको विवरण सही छन् भन्ने खालको एउटा स्वघोषणा फारम पनि भर्नुपर्छ । घरेलु कामदारको हकमा चाहिँ विदेशमा उहाँले काम गर्ने देशमा रहेको नेपाली दूतावासले कानुन अनुसार गरेको सिफारिसको प्रमाणपत्र पनि हुनुपर्छ ।
यसअघि व्यक्तिगत नयाँ श्रम स्वीकृति लिन वा वैधानिकीकरण गर्न दूतावासबाट र सम्बन्धित कम्पनीबाट भिसा, करार सम्झौता लगायतका कागजात श्रम कार्यालय ताहाचलमा सिधै पठाउँदै आएकोमा अब भने यस्ता कागजात श्रमिकलाई पठाउन पर्ने छ । श्रमिकले नै सिस्टममा अपलोड गर्न सक्नेछन् ।
अब वैधानिकीकरणमार्फत श्रम स्वीकृति भन्ने शब्द हटाइन्छ
यसअघि विभिन्न भिसामा अर्थात् श्रम स्वीकृति नलिई वैदेशिक रोजगारीमा गएका र स्वदेश फर्किएपछि फेरि त्यही देशमा त्यही कम्पनीमा काम गर्न जान चाहनेहरूले वैधानिकीकरणमार्फत श्रम स्वीकृति लिँदै आउनुभएको थियो । तर श्रम मन्त्रालयको वैशाख ७ गतेको निर्णय अनुसार भने अबदेखि वैधानिकीकरण भन्ने शब्द श्रम स्वीकृति लिँदा रहने छैन ।
उहाँहरूले पनि व्यक्तिगत रूपमा नै श्रम स्वीकृति पाउनुहुन्छ । पहिले वैधानिकीकरणमार्फत श्रम स्वीकृति लिँदा उहाँहरूले स्वास्थ्य परीक्षण र अभिमुखीकरण तालिम लिन पर्दैन थियो । तर अब नयाँ व्यक्तिगत श्रम स्वीकृतिकै प्रक्रिया अनुसार श्रम स्वीकृति पाइने भएकाले अबदेखि अभिमुखीकरण तालिम र स्वास्थ्य परीक्षण भने गर्न पर्छ । बाँकी प्रक्रिया नयाँ श्रम स्वीकृति लिँदा जे हुन्छ सबै त्यही नै हुन्छ ।
बायोमेट्रिक अब अभिमुखीकरण सेन्टरमै
सन् २०१८ भन्दा अघि श्रम स्वीकृति लिएर जानुभएका कतिपयको बायोमेट्रिक छुटेको हुने रहेछ । उहाँहरूले अहिले पुनः श्रम स्वीकृति लिँदा भने कार्यालयमै आएर बायोमेट्रिक गरिरहनुभएको छ ।
यो सङ्ख्या एकदमै थोरै छ । तर अब नयाँ श्रम स्वीकृति लिँदा भने अभिमुखीकरण तालिम लिने ठाउँमा नै उहाँहरूको बायोमेट्रिक हुन्छ । अहिले त ई पासपोर्ट आइसकेको छ । त्यसमा पनि बायोमेट्रिक हुन्छ । अनि राष्ट्रिय परिचयपत्रमा पनि बायोमेट्रिक हुने हुँदा पछि गएर यो सिस्टम एकीकृत हुँदै जाँदा वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरूको बायोमेट्रिक फेरि लिनु पर्ने अवस्था नरहन पनि सक्ला ।
तर अहिलेको हकमा भने पुनः श्रम स्वीकृति लिनेहरूले पहिले बायोमेट्रिक भएको छैन भने कार्यालयमा आउन पर्‍यो र नयाँ लिनुहुनेहरुको अब अभिमुखीकरण तालिम लिने ठाउँमा नै हुन्छ ।
कागजात अपलोड गर्दा ध्यान दिनुहोस्
दिनमा सरदर एक हजार जनाले अहिले पुनः श्रम स्वीकृति लिइरहनुभएको छ । तर कतिपयको कागजात मिल्दैन । कतिपय कागजात नक्कली पनि हुन्छ । यस्तो बेलामा आवेदन अस्वीकृति हुन्छ र सेवाग्राहीले झन्झट खेप्न पर्छ ।
हामी यो यो कागजात नमिलेर तपाईँको निवेदन अस्वीकृति भयो भनेर भन्छौँ तर कतिपयले कारण नै नहेरी फेरि रि–सवमीट मात्र गर्नुहुन्छ । अहिले चाहिँ हामीले यस्तो जसले गर्नुहुन्छ उहाँलाई फोन गरेर वा एसएमएसमार्फत पनि जानकारी दिने गरेका छौँ ।
त्यसैले चाहिने कागजात के हुन् भनेर ध्यान दिन पर्‍यो । कतिपय कागजातहरू दूतावासबाट पनि प्रमाणीकरण गर्नु पर्ने हुन्छ । करार सम्झौतादेखि अन्य कतिपय कागजात कम्पनीबाट इमेल आउनु पर्ने हुन्छ । प्रक्रियागत रूपमा नभएमा आवेदन अस्वीकृति हुन्छ ।
संस्थागत श्रम स्वीकृतिको हकमा म्यानपावर कम्पनीबाट सबै कुरा मिलेर आएको छ भने बढीमा दुई दिन नभए उसै दिन काम सक्ने गरेका छौँ । तर कागजात नै पुगेन र पुर्‍याउन पनि सक्नुभएन भने त चार पाँच दिन पनि लाग्छ सक्छ ।
अर्को कुरा चाहिँ कतिपयले आजै टिकट हुन्छ र आजै मेरो त भरेको उडान छ भनेर आउनुहुन्छ । उहाँहरूको समस्या हामी बुझ्छौँ । तर अनलाइन सिस्टममा उहाँलाई हतार छ भनेर गर्न नमिल्ने अवस्था छ । उदाहरणका लागि उहाँको एक हजार नम्बर हो भने ९ सय ९९ नम्बर नसकी उहाँको काम गर्न सिस्टमले दिँदैन । यस्तो बेलामा समस्या हुन्छ ।
त्यही भएर हामीले भन्ने पनि गरेका छौँ कि कम्तीमा ३ कार्य दिन अघि नै आवेदन दिनुहोस् । कागजात पुगेको छ भने त त्यसै दिन काम भइहाल्छ तर यदि केही पुगेन भने पनि अघि नै आवेदन दिएमा सजिलो हुन्छ ।
अहिले भनेको हामीले सरदर ३ कार्य दिनमा सबैजसो काम सक्ने नै गरेका छौँ । दैनिक १०/११ सयले त पुनः श्रम स्वीकृति मात्र लिइरहनुभएको छ । सबै प्रक्रिया मिलेमा पुनः आजको आजै धेरैको काम हुन्छ । तर कतिपयको कागजातहरू पुगेन भने आजको चाहिँ भोलिसम्म हुनसक्ने भयो ।
टोकन सिस्टम अहिले पनि छ । तर अहिलेको कुरा अलिक फरक छ । पहिले भौतिक रूपमा उपस्थित भएर काम गर्दा चाहिँ जुन दिनको मिति थियो त्यस दिनको लागि मात्र हुन्थ्यो ।
तर अहिलेको अनलाइन प्रविधिमा चाहिँ त्यस्तो हुँदैन । आजको मिति छ र भएन भने त्यसमा भोलि पनि हुन सक्ने भयो । भोलिको काम गर्दा आजको सकिएपछि मात्र भोलिको काम हुन्छ ।
दैनिक लगभग ११ सयको टोकन खुल्छ । तर कहिले काहीँ कतिपयको टिकट नै छुट्ने अवस्था छ भने त रातिसम्म बसेरै भए पनि काम गरिरहेको अवस्था छ ।
टोकन नै नराख्दा पनि हुने हो तर टोकन नराख्दा के बेथिति हुँदो रहेछ भने कहिले एकै दिन एकदमै धेरै मानिसले भरिदिने र कुनै दिन कम हुने हुँदो रहेछ । यस्तो बेला एक महिनापछि उडान भएको मानिसको त ठिकै होला तर कतिपय त भोलि नै उड्न पर्ने पनि हुन्छ यस्तो बेलामा चाहिँ समस्या हुने रहेछ ।
त्यस कारण हामीले टोकन सिस्टम चाहिँ राखेका हौँ । संस्थागत श्रम स्वीकृतिको हकमा टोकनमा कुनै लिमिट छैन । पहिले व्यक्तिगतको हकमा १५० हाराहारी र लिगलाइजेसनको ५० हाराहारी हुन्थ्यो । त्यो टे«न्ड हेर्ने हो भने व्यक्तिगतमा चाहिँ साढे दुई सय जतिको टोकन छ दैनिक अहिले ।
पुनः श्रम स्वीकृतिको चाहिँ सङ्ख्या पनि धेरै भएको हुँदा त्यसमा चाहिँ लिमिट गरिएको छ । दैनिक लगभग ११ सयको टोकन खुल्छ । तर कहिले काहीँ कतिपयको टिकट नै छुट्ने अवस्था छ भने त रातिसम्म बसेरै भए पनि काम गरिरहेको अवस्था छ ।
(कार्यालय प्रमुख अर्यालसँग गरिएको कुराकानीमा आधारित ।)
रमेश अर्याल वैदेशिक रोजगार कार्यालय ताहाचल काठमाण्डौका कार्यालय प्रमुख हुनुहुन्छ ।
May 21, 2022, 2:01 p.m.
गर्न त ठीकै गर्नु भएको हो , तर बाहिर नागरिकका समस्या कसले कसरी बुझ्ने ? एक दिनमा कुनै श्रम पनि हुँदैन/कतिजना टिकट अनुसार जान पाएका छैनन् श्रम नभएर ...यस्तो समस्या कसलाई राख्ने हो अनि युरोप जस्तो देशको श्रम किन रोकेको बुझ्न सकिएन ...अब यो कुरा कसलाई सोध्ने? कसरी बुझ्ने ???
May 21, 2022, 12:29 p.m.
मेरो पोल्याण्डको भिसा लागेको १ महिना भैसक्यो / अहिलेसम्म बाहिर सोध्दा व्यत्तिगतको लागि श्रम खुलेको छैन भन्छ , पोल्याण्डको खबर पनि दिनुस न ....पोल्याण्डको व्यत्तिगत श्रम खुल्ली कि बन्द नै छ ??
Megh natha bhusal
May 21, 2022, 9:40 a.m.
We highly appreciate to you Ramesh Aryal jee You are good sample for organization , you did very very nice work for public .
May 21, 2022, 8:19 a.m.
स्वघोषणा फारमको नमुना राख्देको भए अझ उत्तम हुने थियो |